CAYAARKEENA "MAGAALADA HERO"
CAYAARKEENA "MAGAALADA GEESIGA" ayaa caan ku ah Shiinaha iyo waddamada kale.
Waqtiga: 2020-01-13 Hits: 45
HERO MACHINE waa soo saare xirfadle ah oo ku hawlan soo saarista & soo saarida mashiinada balaastigga ah, sida mashiinka afuufa Filimka, Mashiinka bacda qaadashada, mashiinka wax daabaca, mashiinka dib u warshadeynta caaga, mashiinka wax lagu xiro iwm oo ay weheliso waayo aragnimo sanado badan ah oo ku saabsan waxqabadka xirfada iyo ka dib adeegga wanaagsan HEROMACHINE waxaa loo oggolaaday inay tahay badeecado aqoon u leh mashaariicda Dowladda iyo mashaariicda gaarka loo leeyahay oo dhan 100 waddan iyo gobollo, sida Afrika, Bariga Dhexe, koonfur-bari Aasiya, Koonfurta Ameerika, Yurub oo leh tiro badan oo isticmaaleyaal dibedda ah.
Waxaan dejinay hadafka ah "soo saarista wax soo saarka ugu fiican, sameynta nooca ugu fiican, fulinta maamulka ugu fiican, iyadoo laga jawaabayo tartanka adduunka".
Waxaan si firfircoon ula qabsaneynaa faa'iidooyinka dhiggeena caalamiga ah iyo farsamooyinka sare ee laga keeno dib-u-baarista iyo horumarinta alaabooyinka cusub iyo hagaajinta farsamooyinka. Warshadeenu waxay ku taalaa Magaalada Ruian. Waxay qiyaastii 30 km u jirtaa garoonka diyaaradaha ee Wenzhou, 3 saacadood oo tareen ah oo u dhaxeysa Shanghai, nus saac saac tareen u dhaxeysa yiwu.
Waxaan leenahay maareyn wax soo saar wanaagsan iyo nidaamyo kormeer tayo leh si loo hubiyo in mashiin kasta uu ku fiican yahay tayada. Waxaan bixinaa adeeg tixgelin leh waxaanna u tixgelineynaa macaamiisheenna inay yihiin khasnad weyn. Waxaan diyaar u nahay inaan bixinno iibsi hordhac ah oo wanaagsan isla markaana dhakhso leh iyo adeegga iibka kadib. Waad ku kalsoonaan kartaa alaabtayada boqolkiiba buuxa.
Waxaan jeclaan lahayn inaan lashaqeyno asxaabteena oo aan horumar wada sameyno. Waan dhageysaney oo waxaan sugeynaa su'aalahaaga oo xiiso leh iyo waliba mashaariic guuleysata oo kula socda!
Daryeel diirran oo ka yimaada shirkadda Sunpai